Fanatanjahantena manohitra Osteoarthritis ao amin'ny tanana [Fanatanjahan-tena manohitra ny Osteoarthritis amin'ny tanana sy ny tànana]
Fanatanjahantena manohitra Osteoarthritis amin'ny tanana
20 / 11 / 2018 /Fanamarihana 0/i Osteoarthritis (Osteoarthritis), Fanazaran-tena sy fanatanjahan-tena, rheumatism/av loza
Fanatanjahantena manohitra ny Osteoarthritis tanana
Osteoarthritis amin'ny tanana dia mety hiteraka fanaintainana amin'ny tanana ary mihena ny tanjaky ny famoretana. Ireto misy fanazarana fito amin'ny osteoarthritis amin'ny tanana izay samy manatanjaka sy manome fiasa tsara kokoa.
Osteoarthritis dia miteraka fahapotehan'ny cartilage artikular izay mipetraka eo anelanelan'ny tonon-taolana Ity cartilage ity dia heverina ho toy ny fanentanana manafintohina azy, fa raha simba kosa dia mampihena ny habetsaky ny fihodinana amin'ny hetsika izy io. Io dia mety hiteraka aretin-doha sy fahasosorana eo amin'ny tonon-taolana.
Rehefa mikapoka tanana sy rantsantanana ny osteoarthritis, dia mety hiteraka fanaintainana sy fanaintainana henjana izany. Ho tsikaritrao ihany koa fa mihombo ny fanaintainana rehefa mampiasa betsaka ny tananao amin'ny asa miverimberina ianao - ary ny fahalemen'ny tanana dia mety hahatonga zavatra tsotra aza toa ny manokatra sarom-baravarana tsy azo atao mihitsy.
SOSO-KEVITRA: Betsaka ny olona mampiasa azy fonon-tànana famatrarana namboarina manokana (misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy) ho an'ny fanatsarana ny asa amin'ny tanana sy amin'ny rantsantanana. Ireo dia mahazatra indrindra eo amin'ireo rheumatologists sy ireo izay mijaly amin'ny syndrome carnel tunnel maharitra.
Miady izahay ho an'ireo izay manana Diagnostika fanaintainana maharitra sy rheumatism mba hanana fotoana tsara kokoa hanaovana fitsaboana sy fizahana - zavatra tsy eken'ny rehetra, indrisy. Toa anay ao amin'ny pejin'ny FB og fantsona YouTube ao amin'ny media sosialy hanatevin-daharana antsika amin'ny ady ho amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny olona an'arivony.
Ity lahatsoratra ity dia handalo fanazaran-tena fito ho an'ny osteoarthritis amin'ny tanana - ary azo atao tsara isan'andro. Eo am-pototry ny lahatsoratra azonao atao koa ny mamaky tsikera avy amin'ny mpamaky hafa, ary koa mijery horonantsary misy fanazaran-tena namboarina ho an'ireo manana osteoarthritis eo am-pelatananao.
Eto ianao dia afaka mahita ilay horonan-tsary ho an'ny fanatanjahan-tena fito ataontsika amin'ity lahatsoratra ity. Azonao atao ny mamaky ny antsipiriany momba ny fomba fanaovana ny fanazaran-tena amin'ny dingana 1 ka hatramin'ny 7 eto ambany.
1. Ampifanohy amin'ny zanak'anabaviny
Ny fomba mora sy malefaka hitazomana ny tanjaka eo an-tananao, ary koa manamaivana ny fanaintainana miaraka, dia ny fanaovana fanatanjahan-tena tsotra. Ny hetsika toy izany dia mety manampy koa ny hampiasa mora foana ny tendons sy ligamentes. Ny fanazaran-tena dia afaka mandray anjara amin'ny famokarana tsiranoka iraisana (tsiranoka synovial).
Ny fanatanjahan-tena voalohany alaintsika dia mifandray amin'ny totohondry. Azonao atao matetika ny manao io fanazaran-tena io isan'andro, ary indrindra rehefa mahatsiaro ho henjana ny tananao sy ny rantsan-tànanao.
Tazano amin'ny tananao rantsantanana ny tananao.
Afatory amin'ny tanana miadana ny tananao ary azonao antoka fa eo amin'ny rantsan-tanan'ny rantsan-tanana ny ankavanao.
Sokafy indray ny tananao ary atondraho tsara ny fanondronao.
Avereno imbetsaka ny fanatanjahan-tena isaky ny tanana.
2. Aondiho ny fanondronao
Ny fiondrika sy ny fanondranana ny rantsantanana dia manampy amin'ny fitazonana ny ra sy ny tsiranoka miaraka. Hifandimby hanetsika ny rantsan-tànana ary tsy dia tery.
Mihazona ny tananao eo anoloanao amin'ny rantsantanana malalaka.
Atombohy amin'ny ankiben-tànanao ary atsobony moramora mankany an-tànanao ny fanondronao.
Avy eo dia manohy amin'ny rantsantanananao ary asio miverina amin'ny alàlan'ny rantsantanana dimy rehetra
Ny ankihibe dia mitana andraikitra lehibe amin'ny asantsika - ary indrindra amin'ny asa mitaky be kokoa. Izany indrindra no antony maha-zava-dehibe ny fanazaran-tena ny fihenan-kelin'ny tendon-taolana sy ny tadin-drivotra toy ny rantsan-tanana hafa.
Avy eo, apetraho moramora eo amin'ny felanao sy ny fototry ny rantsan-tànana ny ankibenanao.
Raha tsy tonga hatreny am-pototry ny rantsan-tànana kely ianao dia aza manao na inona na inona - aforeto fotsiny araka izay tratranao.
Ny fihetsiketsehana bebe kokoa sy ny fampihetseham-batana malefaka dia anisan'ny antony iray lehibe hampihemorana ny fivoaran'ny osteoarthritis amin'ny tanana sy ny rantsan-tànana, fa izahay kosa dia tena mamporisika ny fampiofanana feno amin'ny vatana iray manontolo mba hampitombo ny fivezivezena tanteraka ao amin'ny vatana ary avy eo ny fiofanana amin'ny dobo rano mafana dia zavatra tena amporisihinay.
4. Ataovy ny taratasy «O»
Ity fanazaran-tena amin'ny tanana ity dia tsotra ihany araka ny fieritreretany azy - mila mampiasa ny rantsan-tànanao ianao mba hamolavolana ny litera "O". Ity dia fanatanjahan-tena tanteraka izay misy ny rantsantanana rehetra ary noho izany dia tsara amin'ny fanoherana ny hatoka ao an-tanana.
Aondriho moramora ny rantsan-tànanao mandra-pahatonga azy ireo hamorona ny endrik'ilay litera "O".
Atondraho tanteraka ny rantsan-tànanao ary tanteraho tanteraka mandritra ny segondra vitsy.
Ny fanazaran-tena dia azo averina imbetsaka isan'andro.
5. Ny latabatra manantona
Ity fanazaran-tena ity dia tanterahina amin'ny tanana eo ambony latabatra - izany no anarany.
Apetraho eo amin'ny latabatra ny handgun amin'ny tananao.
Avelao hanondro ny ambony ny ankihavanana.
Tazomy amin'ny toerana iray ihany ny ankihibenonao - fa avelao ny rantsan-tànanao hiondrika tsimoramora ao anatiny.
Avy eo atsangano indray ny rantsantananao - ary tazomy mandritra ny segondra vitsy ilay toerana.
6. Ny fanondranana tànana
Maro no mety hieritreritra fa tsy afaka mampiofana ny tananao sy ny rantsan-tananao ianao fa aiza eto an-tany no tsy tokony hahavita azy? Ny rantsan-tanana sy ny tanana dia misy tonon-taolana, hozatra, hozatra, tendons ary ligament; toy ny faritra hafa amin'ny vatana. Ka voajanahary, ny fitomboan'ny fihodinana sy ny firoboroboana dia afaka mandray anjara amin'ny fikojakojana sy amin'ny fiasa mahazatra.
Apetaho amin'ny tany ny felanao.
Atombohy amin'ny ankihiben-tànanao - ary atsangano moramora amin'ny tany izy.
Mihazona ny toerana mandritra ny segondra vitsy alohan'ny hampidinanao ny rantsantanana indray.
Ampiasao ny lalanao amin'ny alàlan'ny rantsantanana dimy.
Rehefa dia betsaka kokoa ny ratra amin'ny osteoarthritis dingana osteoarthritis manan-danja (dingana 3 sy 4) ho hitanao matetika fa na ny asa sy hetsika tsotra indrindra aza dia lasa sarotra tanterahina tsara - ary mety hahasosotra tokoa izany. Na izany aza, zava-dehibe ny tsy fanary ny faharetana ary ny fitazonana mifantoka hatrany amin'ny fanazaran-tena ataonao, mba tsy hihena ilay fiasa mihoatra ny ilaina.
7. Famatoran-tànana sy tànana
Ny hozatra sy tendon maromaro maromaro izay afaka mandray anjara amin'ny fehin-tànana sy fanaintainana eo amin'ny tanana miraikitra amin'ny tadivavarana. Noho izany, tena ilaina ny tsy manadino ny manitatra sy manantitroka ity ampahany amin'ny tànana ity rehefa manao ny fanazaran-tena.
Atsipazo ny sandrinao havanana.
Tandremo amin'ny tananao havia havoana ny tananao havia ary fehezo moramora ny tànanao mandra-pahafatinao ny hatakao.
Mihazona ny tadiny mandritra ny 10 segondra.
Avereno imbetsaka ny fanatanjahan-tena isaky ny sandriny.
Ity fanazaran-tena fahafito sy farany ity dia misy fanazaran-tena fito ho an'ny osteoarthritis izay amporisihinay hataonao isan'andro. Nasongadinay tany am-piandohana fa ny fanaovana fanatanjahan-tena sy ny fanaovana fanatanjahan-tena dia mety hampisy fivelarana mihombo ary hanapotika ny sela simika amin'ny hozatra sy hozatra voakasik'izany - izay mety hitarika fanaintainana vetivety.
Vakio koa: - Ireo dingana 5 an'ny lohalika osteoarthritis
Ny lahatsary eto ambany dia mampiseho ohatra momba ny fanatanjahan-tena ho an'ny osteoarthritis amin'ny tenda. Araka ny hitanao dia malefaka sy malefaka ihany koa ireo fanazaran-tena ireo.
Safidy C: Manaraha sy mitovitovy Pejinay Facebook (kitiho eto raha tiana) ary Fantsona YouTube izahay (tsindrio eto raha mila horonan-tsary misimisy kokoa!)
NEXT PAGE: - Ity Tokony ho Fantatrao Momba ny Osteoarthritis amin'ny tananao
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/håndartrose-øvelser.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2018-11-20 18:22:252021-03-21 13:42:01Fanatanjahantena manohitra Osteoarthritis amin'ny tanana
Sintona amin'ny fanafihana am-po Pasifika Famantarana mialoha ny metabolism ambany